Apple dia nandefa iPad mihoatra ny Samsung sy Amazon miaraka | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | 02/08/2021 20:00 | iPad, About us
Ny iPad no takelaka tsara indrindra izay hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao, takelaka misy ao kinova marobe ho an'ny paosy sy ny filàna rehetra ny mpampiasa, ny fahafaha-tsy hitanay amin'ny mpanamboatra hafa.
Araka ny filazan'ny orinasa IDC, nandritra ny telo volana farany Apple dia nandefa iPad 12.9 tapitrisa (Tsy rava ireo maodely). Raha mampitaha an'ireo tarehimarika takelaka nalefan'i Samsung sy Amazon teny an-tsena isika, dia hitantsika fa ny habetsaky ny roa dia tsy mihoatra ny isan'ny singa nalefan'i Apple, miisa 12.3 tapitrisa ny singa.
Na eo aza ny zava-misy fa i Apple no mpanamboatra nandefa takelaka be indrindra tamin'ny telovolana farany, tsy io no nitombo indrindra. Raha Samsung sy Amazon dia niaina fitomboan'ny isan'ny fandefasana 13.3% sy 20.3%, ny fitomboan'ny Apple raha oharina tamin'ny taona teo aloha dia 3,5%.
Mpanamboatra haingana indrindra Lenovo no isan'ny takelaka nalefa. Huawei dia nanidy ny fanasokajiana tamin'ny fihenan'ny 53,7% ny isan'ny entana nalefa raha oharina ny tamin'ny taona lasa.
Raha ny angona IDC, amin'izao fotoana izao Apple manjaka ny tsena amin'ny fizarana 31,9%, arahin'i Samsung miaraka amin'ny 19,6%. Eo amin'ny laharana fahatelo dia i Lenovo miaraka amina 11,6%, arahin'i Amazon miaraka amin'ny fizarana 10,7% ary i Huawei misy 5.1%. Ny fizarana 21% ambiny dia zarain'ny mpanamboatra kely kokoa.
Ny takelaka dia iray amin'ireo fitaovana elektronika izay fitomboana bebe kokoa niainana nandritra ny taona 2020 noho ny areti-mandringana, miaraka amin'ny Chromebooks noho ny fahafahany mianatra. Antenaina fa hijanona ireo isa ambony ireo mandritra ny volana manaraka mandra-pahafahan'ny coronavirus antsika hiverina amin'ny fiainana taloha (raha azo atao).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia nandefa iPad mihoatra ny Samsung sy Amazon natambatra
Ny "Tinder for anti-vaccine" dia noroahina tao amin'ny App Store